Sheeko dhiirrigelin leh sida tii Awa, oo aan ka labalabeynin inay ka tagto shaqadeeda sarkaalka maamulka ee Safaaradda Mali si ay tababar ula qaadato IFOCOP una diyaariso shaqadeeda cusub: xakamaynta maaraynta.
"Haddii ay jirto hal shay oo noloshu i bartay, waa inaanan waligood dagaallada joojin". Awa Niare, soddon, waa gabar da 'yar oo geesinimo leh. Waxaa la mariyay kuraasta IFOCOP si loogu tababaro xirfadda Maareeyaha Maareynta, markhaatigeedu wuxuu muujinayaa du koorsada caqabadda oo waa inay ku siisaa baaquli wanaagsan oo rajo leh, sida iyada oo kale, waxaad ka fikireysaa xirfadle dib-u-tababar.
Tallaabooyinka ugu horreeya
Horay ugasoo qalin jabisay Maamulka Ganacsiga (BAC + 3), Awa wuxuu wali kusugnaa boostada 3 sano kahor safaarada Mali as aAhawsha maamulka. Nolol maalmeed xirfad leh oo aad u caadi ah oo ay iyadu tixgeliso inay aad uga fog tahay tababbarkii ugu horreeyay, taas oo ay mar hore tixgelinaysay waqtigaas si loo xoojiyo dhinaceeda xisaabaadka si looga gudbo dhanka xirfadda aragtida. Waxay macluumaad ka heshaa Pôle Emploi waxayna isla markiiba la xiriirtaa xarunta IFOCOP. by Melun. Si dhakhso leh, Awa wuxuu ula socdaa iyada iyada
Awa: dib-u-tababar degdeg ah iyo CDI oo ay ugu mahadcelisay dibloomaheeda maareynta maareynta July 10th, 2021Tranquillus
READ Koontada tababarka shaqsiyeed: wicitaanada taleefanka, SMS, ka digtoonow isku dayga khiyaanada
horeFoojarka makhaayadaha: shuruudaha isticmaalka oo loo habeeyay illaa Ogosto 31, 2021
socdaCryptoOli: Maalgelinta Cryptocurrency ee Bilowga
La xoojiyey shakhsi dabagal